चीन बच्चाहरूको लागि पुनः प्रयोग योग्य मास्क गद्दा उत्पादक र आपूर्तिकर्ता - डोks्गगुआन FUYA धातु र प्लास्टिक उत्पाद कं, लिमिटेड।
घर > उत्पादनहरू > अनुहारमा लगाइने मास्क > बच्चाहरूको लागि पुन: प्रयोग योग्य मास्कहरू
पिग स्नुउट डिजाइन, उमालेर, छालामैत्री सिलिका जेल, पहिरिए पछि बुरको भावना हुँदैन, पसिनाले छालामा टाँसिएको असुविधा हुँदैन। डबल भेन्टसँग, यसले पानीको बाफ छिटो डिस्चार्ज गर्न सक्दछ र अधिक सहज रूपमा सास फेर्न सक्छ। फिल्टर तत्व सुरक्षा डिजाइन, फिल्टर तत्वको प्रत्यक्ष प्रदूषण कम गर्न सक्दछ, उहि समयमा, सीधा मास्कलाई बाँझीकरण गर्न सक्दछ, फिल्टर तत्व वृद्धावस्थाको लामो उपयोग!
â € ¢ ब्रान्ड: FU YA
â € ¢ मोडेल: FUYA बच्चाहरूको मास्क
â € ¢ कार्यहरू: एन्टी-स्मग, एन्टि-डस्ट र एन्टि-ब्याक्टेरिया
सामग्री: सिलिका जेल, पीपी, पीसी + एबीएस
â € ¢ रंग: मास्क
। € ¢ निर्माता: डोgu्ग्वान फुया हार्डवेयर प्लास्टिक उत्पाद कं, लि
â € to लागू: बच्चाहरू
â € ¢ सुरक्षा मानक: चीन GB / T 32610 मानक
â € protection संरक्षणको स्तर: A
सुँगुर डिजाइन, उमालेर, छाला मैत्री सिलिका जेल, पहिरन पछि बुर महसुस हुनेछैन, पसिनाले छालामा टाँसिएको असुविधा हुँदैन।
डबल भेन्टको साथ, यसले पानीको बाफ छिटो डिस्चार्ज गर्न सक्दछ र अधिक सहज रूपमा सास फेर्न सक्छ।
फिल्टर तत्व सुरक्षा डिजाइन, फिल्टर तत्वको प्रत्यक्ष प्रदूषण कम गर्न सक्दछ, उहि समयमा, सीधा मास्कलाई बाँझीकरण गर्न सक्दछ, फिल्टर तत्व वृद्धावस्थाको लामो उपयोग!
** अल्ट्रा लाइट डिजाइन, विद्यार्थी र बच्चाहरूका लागि सजिलो पसीना र व्यायामको ठूलो मात्रामा डराउँदैन, लामो समय लगाउनको लागि उपयुक्त।
मास्क प्रयोगको लागि सिफारिसहरू:
शेल र कम्पोनेन्टहरू - नियमित रूपमा पूरै मास्कको सतहलाई रक्सीको साथ सफा वा कीटाणुरहित गर्नुहोस्।
फिल्टर तत्व - प्रत्येक to देखि days दिनमा प्रतिस्थापन गर्न सिफारिस गरिन्छ। पुरानो फिल्टर तत्व हटाउनुहोस् र यसलाई फ्याक गर्नुहोस्। त्यसपछि पूरै मास्कलाई पानीले कुल्ला र नयाँ फिल्टर तत्वको साथ बदल्नुहोस्।
हट ट्यागहरू: बच्चाहरू, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ताहरूको लागि पुन: प्रयोगयोग्य मास्कहरू